Masiibadda Barafka Iyo Duufaanta Wada Socda Ee Ku Habsaday 11 Gobol Oo Maraykanka Ah | Araweelo News Network
Masiibadda Barafka Iyo Duufaanta Wada Socda Ee Ku Habsaday 11 Gobol Oo Maraykanka Ah
Buurro Baraf Ah Oo Xidhay Wadooyinka , Tirada Dhimashada Iyo Xusuusta Taariikhda 118 Kadib
Washington(ANN)ku dhowaad 20 Qof, ayaa ku geeriyootay duufaanno xooggan oo baraf wata oo ku dhuftay gobollada dhaca Xeebta bari ee dalka Mareykanka, taas oo sidoo kale saameysay isku socodkii guud ee gaadiidka dhulka iyo cirka, waxaana la hakiyay ku dhowaad, 3,700 diyaaradood iyo 8,700 duulimaad diyaaradeed oo hawada ah. sida lagu baahiyay (tracking service FlightAware.com.)
sidoo kale waxa lagu amray dadka in aanay guryohooda ka bixin, waxaana keliya oo meelaha qaar shaqaynaya gaadiidka gurmadka, iyadoo isgaadhsiinta iyo Laydhku ka go;aan yihiin gobolo badan.
Arrintan, ayaa sababtay in 11 gobol oo ku yaal Bariga Maraykanka lagaga dhawaaqo inay galeen xaalad maxaasiro ah. kadib markii wadooyinka iyo guryaha dushooda uu buuxiyay barafkii ugu xumaa inta la xuuusan yahay wixii ka danbeeyay 1896, soo mara taariikhda Maraykanka, xiligaa oo uu gaadhay Maraykanka, heerka cabirka temperatures 6, halka uu gaadhay todobaadkan cabirka temperature-ku 2, marka laga reebo 2004, 118 sannadood kadib, waa barafkii ugu xumaa ee sidan ugu baaha Maraykanka.
Gobollo ku yaalla dhinaca bari ee dalkan Maraykanka waxaa weli ka da’aya baraf xooggan, Magaalada New York ayaa Iyana gebi ahaan la xidhay, iyada oo dadkana lagu amray inay guryahooda ku ekaadaan.
Illaa labaatan qof dad gaadhaya ayaa u dhintay barafkan xooggan ee da’aya, waxana uu saamayn ku yeeshay illaa 85 Milyan oo qof, kuwaas oo waajahay xaalad adag markii ay waayeen gebi ahaanba adeegyadii aaasaasiga ahaa, sida Laydha, Biyaha iyo Isgaadhsiinta. sidoo kale boqollaal kun oo kale, ayaan la ogayn xaalada ay ku sugan yihiin.
Duufaanta barafka wadata waxa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dadka ku naf waayay illaa Lix gobol oo kuyaalla dalka Mareykanka. Lix rqof ayaa ku geeriyooday Gobolka North Crolina, halka Seddax kale ku geeriyoodeen magaalada New york, laba qof oo ku geeriyooday Virginia, halka tiro kalena ay ku geeriyooden gobollada kala ah Kantaki, Maryland iyo Arkansas.
Caasimada Matraykanka ee Washintong, ayaa weli waxa ka go’an adeeggii Korontada ee Laydhka iyo isgaadhsiinta, taas oo ay sababtay masiibada ku habsatay ee Barafka iyo roobabka is wata dartood. In kabadan 140 kun oo ruux oo ku nool Gobolka North Crolina iyo 90 kun oo qof oo ku nool Gobolka New Jersi ayaa sidoo kale ka cabanaya Laydh la’aan baahsan, kadib markii duufaanta Barafka wadataa ay dhulka dhigtay Xadhkihii iyo isgaadhsiinta, isla markaana xidhay wadooyinka gaadiidka iyo garoomada diyaaradaha.
galbeedka vargenia, ayaa la sheegayaa inay tahay iyana meelaha ugu cabsida badan, iyadoo kumanaan qof magaalooyinka qaar isugu soo baxeen si ay gurmadka uga qayb qaataan, masuuliyiinta Maraykanka, ayaa la tacaalaya sidii ay xaalada wax uga qaban lahaayeen, waxaana ay sheegeen in qiyaastii lacag dhan 1bilyan oo dolar lagu kharash garaynayo sidii xaalada loogu soo celin lahaa sidii hore, isla markaana adeegyadii bulshadu usoo laaban laaban lahaayeen.
Gaadiidkii iyo basaskii ka shaqen jiray gudaha magaalada Washintong ayaa joogsaday, iyadoona gebi ahaanba ay shaqadii joojiyeen Tareenadii dhulka hoostood mari jiray, halka waddooyinkana ay faaruq ahaayeen marka laga reebo tiro yar oo ka tirsan gaadiidka Booliiska iyo dad teel teel ah oo jidadka maraya.
Dhinaca kalena duufaantan ayaa laga baqin baqaa inay u gudubto qaar ka tirsan dalalka kuyaalla Qaaradda Latin America, iyadoona dadweynaha dalalkaas ku nool loogu baaqay inay muujiyaan taxadar dheeraad ah, islamarkaana ay guryahooda ku nagaadaan.